म'रेका काग बटुलेर, कुखुराको मासु भन्दै पकाएर बेचे ब्यापारीले ! - Aajako Nepali Khabar
Home Others म’रेका काग बटुलेर, कुखुराको मासु भन्दै पकाएर बेचे ब्यापारीले !
म’रेका काग बटुलेर, कुखुराको मासु भन्दै पकाएर बेचे ब्यापारीले !
Others admin November 18, 20200Comment
सडकमा सजिलै उपलब्ध हुने खानेकुरा हामी मध्ये कतिपयको रोजाइमा पर्छन । काठमाडौं लगायत नेपालका मुख्य शहरहरुमा सडकमा पाइने तयारी अवस्थाका खानामा युवायुवती झुम्मिएको देख्न सकिन्छ । कुखुरा, खसी र राँगाको मासुका परिकार, चाट तथा पानीपुरी पाइने स्थानमा युवायुवती झुम्मिएको देख्न सकिन्छ ।
तर तपाईले कहिल्यै अनुमान गर्नुभएको छ त्यसको गुणस्तरका बारेमा ? कतिपय व्यापारीहरु उपभोक्ताको यस्तै बानीको फाइदा उठाउँदै यति सम्म ठगी गरिरहेका हुन्छन्की हामीले कल्पना पनि गरेका हुँदैनौं ।